Gaadhi Qaylo Dhaan Ah: Qaab Fudud Oo Looga Iibsado Qaylo Dhaan Ka Dhan Ah Baraha Bulshada | Martech Zone
Kanaalada dhijitaalka ah waxay ku sii wadaan inay u koraan si xawli ah, caqabad ku ah suuqlayda meel kasta marka ay go'aansadaan waxa ay kor u qaadayaan iyo halka ay ku horumarinayaan alaabadooda iyo adeegyadooda internetka. Markaad raadinayso inaad gaadho dhagaystayaal cusub, waxa jira kanaalo dhijitaal ah oo dhaqameed sida daabacaadaha warshadaha iyo natiijooyinka raadinta… laakiin sidoo kale way jiraan saameynta.
Suuqgeynta saamaynta leh ayaa ku sii socota kobaca caannimada sababtoo ah saameeyayaasha ayaa si taxadar leh u koray oo u dajiyay dhagaystayaashooda iyo taageerayaashooda wakhti ka dib. Dhagaystayaashooda ayaa koray si ay u aaminaan iyaga iyo alaabta ay miiska la yimaadaan. La'aanteed ma aha xumaanteeda, in kastoo.
Dad badan oo saameynta si fudud waa dad leh taageerayaal weyn… laakiin had iyo jeer ma laha awood tirooyinkooda. Waxaan isku dhejin lahaa tiirkaas. In kasta oo aan haysto taageerayaal aad u badan, taageerayaashaydu waxay garwaaqsan yihiin inaan tusayo goobo ay ku shaqeeyaan si ay u sameeyaan cilmi-baaris dheeraad ah oo ay u arkaan inay ku habboon tahay. Natiijo ahaan, waxaa laga yaabaa inaan helo dhagsiin badan oo ku saabsan kafaala-qaade ama isku xirka xiriirka la leh… laakiin daruuri maaha iibsashada. Waan ku saxsanahay taas, oo inta badan waxaan hor joogaa xayaysiiyayaasha kuwaas oo ii soo dhawaada ololayaasha suuqgeyneed ee saameeya.
Waxaa jira daraasiin suuqgeynta suuqgeynta dhufto ee halkaas, qaar badan oo iyaga ka mid ah oo aad u adag oo leh codsiyada ololaha, caddaynta falanqaynta, xiriirinta raadraaca, iwm. Saameyn ahaan, waxaan inta badan ka boodaa codsiyadan sababtoo ah wakhtiga ay qaadato in la codsado oo la shaqeeyo shirkadda uma qalmo dakhliga ay waxay bixinayaan olole guul leh. Qaylada Waa caksi...kaliya raadi kuwa wax saameeya, bixi kharashka qayladaada, oo fiirso natiijooyinka. Shoutcart waxay bixisaa sifooyinka iyo faa'iidooyinka soo socda:
Ololeyaasha la qiyaasi karo - Shoutcart waxay bixisaa awooda lagu dalbanayo qaylo-dhaanta saameeyayaasha badan hal mar. Iibso qaylo dhaanta ugu hoosaysa dhawr dollar, iyo in ka badan $10k markiiba.
Dabagalka Tirakoobka - Ku kala shaandhee kuwa raacsan luqadda, waddanka, da'da, jinsiga iyo jinsiga taasoo kuu oggolaanaysa inaad doorato kuwa saameeya kuwa raacaya kuwaas oo u dhigma kuwa aad beegsanayso.
Dabagalka iyo cabbirada - Dabagalka boostada iyo tirakoobyada ayaa diyaar u ah dhammaan ololayaasha, ogow sida saxda ah saameynaha keena ROI-ga ugu badan, hana khasaarin miisaaniyadaada.
Bangi ka weyn ee lacagtaada - Suuqgeyntu waa mid aan qaali ahayn oo ka saxsan goobaha dhaqanka! Waxaad ku bilaabi kartaa Shoutcart kaliya $10!
Hantidhawrka maalinlaha ah - Shoutcart waxay xisaabisaa saameynayaasheenna maalin kasta si aad u hesho macluumaad hufan oo ku saabsan cidda aad la shaqeyso si aad u kordhiso natiijooyinka!
Shoutcart waxaa ka mid ah saameeyayaasha Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, iyo Facebook.
Sida Loo Bilaabo Ololahaagii Ugu Horeeyay ee Shoutcart
Looma baahna wicitaano iib ah iyo qandaraasyo, Shoutcart asal ahaan waa dukaanka khadka tooska ah ee iibsashada qaylo-dhaanta saamaynta leh. Waa kan sida loo bilaabo:
Raadi Raadiyaashaada - Ka dhex baadh kumanaan saameynayaal ah oo ku yaal Shoutcart, ka dibna dooro dhowr kuwa ugu fiican ee ku habboon booskaaga ama bixinta. Waxaad ku dooran kartaa qayb ahaan, cabbirka daawadayaasha, tirada dadka raacsan ama si fudud ayaad ku raadin kartaa ereyga muhiimka ah.
Add to Cart - Ka dib markaad doorato saamaynta ugu fiican, ku dar gaarigaaga oo bilow abuurista amar!
Abuur Dalabkaaga - Buuxi foom fudud oo soo rar muuqaal/fidiyow si ay saamaynayaashu ugu dhejiyaan. Ku dar magacaaga isticmaale ama iskuxirahaaga si qoraal ahaan u qoran, si daawadayaashu u ogaadaan sida loo gaaro dalabkaaga.
Jadwalka iyo Bixinta - Dooro wakhtiga aad door bidayso ee qaylada, oo bixi kharashka amarka. Oggolow ilaa 72 saacadood dadka saameeyay inay daabacaan dalabkaaga laakiin ha werwerin, saameeyayaashu ma soo dhejin doonaan ka hor wakhtiga aad door bidayso.
Hel muujinta - Ka dib marka qayladaada la bixiyo oo la jadwaleeyo, waxaad boostada ka heli doontaa saameynayaal aad dooratay! Way fududahay!
Ka baadh saamaynta Shoutcart
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Qaylada iyo sidoo kale saamayn ku leh shabakadooda.
Tags: iibso ololayaasha suuqgeynta saamayntaiibso qaylo dhaaniibso baraha bulshadaFacebooksaameeyayaasha facebookololeyaasha suuq-geynta saamayntasuuqgeynta suuqgeyntamadal suuq geyn saamayn lehInstagramsaameeyayaasha instagramqayladatiktok saameyn ku lehTwitteryoutubesaamaynta youtube